सौतेनी आमा हेमा मालिनीलाई सनी देओलले किन हाने च’क्कु ? – Khabaarpati
November 21, 2020 Khabar PatiLeaveaComment on सौतेनी आमा हेमा मालिनीलाई सनी देओलले किन हाने च’क्कु ?
काठमाडौ । सबै सन्तानको इच्छा हुन्छ आफ्नो परिवारमा खुसी होस् । बुवा र आमाबीच राम्रो सम्बन्ध होस् । जब धर्मेन्द्र र हेमा मालिनीको जोडी बलिउडमा लोकप्रिय जोडी बन्न थाल्यो उनीहरु एक र्कासंग वास्तवमै नजिकिए । त्यस अघि धमेन्द्रको विवाह भइसकेको थियो । धमेन्द्रको विवाह प्रकाश कौर संग भएको थियो ।
उनीहरुवाट चार सन्तान पनि जन्मिसकेका थिए । जसमध्य सनी देओल, बाबी देओल फिल्मी क्षेत्रमा हिट कलाकार हुन् । दुई छोरी पनि छन् उनीहरुका । धर्मेन्द्रले प्रकाश कौरसँग १९ वर्षको उमेरमा विवाह गरेका थिए ।,,,भिडियो हेर्न तल क्लिक गर्नुहोस्,,,
तर जब धर्मेन्द्र हेमासंग नजिकिन थाले यो कुराले धमेन्द्रको परिवारमा ठूलो भुइचालो आयो । धमेन्द्रले हेमासंग सम्बन्ध विच्छेद गरेर हेमासंग विवाह गर्न चाहन्थे । तर प्रकाशले मानेकी थिइनन् । तर धमेन्द्रले प्रकाशसंग सम्बन्ध विच्छेद नगरी हेमासंग मुस्लिम धर्म पराम्परा अनुसार विवाह गरेका थिए । धमेन्द्रले हेमासँग १९७९ मा विवाह गरे । हेमातीर धर्मेन्द्रका दुूई छोरीहरु ईशा र आहाना छन् ।
आफ्ना बुवाले आमा हुँदा हुँदै अर्को महिलासंग विवाह गरेको सनि देवले सहन सकेनन् । उनले हेमालाई च’क्कु प्र’हा’र गरिदिए । उनी घाइते भइन् र अस्पताल पुगिन् । तर यो कुरा उनको परिवारले गोप्य राख्यो । प्रकाश कौरले पनि यो कुरा गलत भएको प्रतिकृया दिइन् ।
एक अन्र्तवार्तामा प्रकाश कौरले भनेकी थिइन्, ‘सबै बच्चालाई बाबाले आमालाई धेरै माया गरोस् भन्ने चाहन्छन् । तर यसको अर्थ अरु महिलालाई हानी गर्नु भन्ने होइन । उनले आफ्ना सन्तानमा निकै राम्रो संस्कार भएको बताएकी छन् । यो कुरालाई हेमा माmिनिले पनि अस्विकार गरेकी छन् ।
उनले आफ्नो पुस्तकमा सनिले आफु बिरामी हुँदा सबैभन्दा पहिला अस्पताल लगेको कुरा उल्लेख गरेकी छन् । हेमा मालिनीले प्रकाशन गरेको किताब ‘बियोंड द ड्रिम गर्ल’मा आफु दुर्घटना पर्दा सनीले सबै भन्दा पहिला देखेर अस्पताल पुर्याएकोे भन्दै लेखेकी छन् ।,,,भिडियो हेर्न तल क्लिक गर्नुहोस्,,,
कार्ड छापिएर पनि रोकिएको सलमानको त्यो विवाह, संगीताले अन्तिम समयमा भनिदिइन् ‘म तिमीसंग विवाह गर्दिन’